Phupha ngeGumbi leTheatre Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Igumbi lemidlalo yeqonga linobungakanani obukhulu, lixhotyiswe ngezihlalo eziphakanyiswe kakuhle kwaye ngokufanelekileyo linama-acoustics agqwesileyo ukuze nakumqolo wokugqibela igama elithethiweyo eqongeni liqondakale ngokulula. Nangona kunjalo, ezinye iindawo zemisitho ziphantsi kakhulu, ukufumana igumbi elincinane lemidlalo yeqonga kunye nezihlalo ezilula kakhulu. Ngokwesiqhelo imiqolo yezihlalo iphakanyiselwe ngasemva ukuze ube nembono elungileyo yokusebenza kulo lonke. Nangona kunjalo, uhlawula ngaphezulu isihlalo kwimigca engaphambili kunaleyo isemva.
Ukuba uphupha ngeholo, iqonga, elikhanyiswe ngamabala athe gca, linokugxilwa ephupheni. Nangona kunjalo, iphupha elo unokuziva nomoya wegumbi lokundwendwela, mhlawumbi ubumnyama buyakukhathaza. Ekuchazeni iphupha, indawo ephupha ibalulekile. Ngaba uhleli kwindawo yokubonela okanye ngaba yena ume eqongeni kwaye ujonge iholo?
1 Uphawu lwephupha «iholo yemidlalo yeqonga» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Isimboli yephupha «iholo yemidlalo yeqonga» - ukutolikwa kwengqondo
3 Isimboli yephupha «igumbi lokubonela» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iholo yemidlalo yeqonga» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa kwephupha, inqanaba yindawo yokuqikelela el mundo ngokwenene. Kwimodeli, ubomi buboniswa ngalo lonke uyolo kunye nomthwalo, kodwa iminqweno yobuqu kunye nemibono inokuvavanywa kwaye itolikwe.
Nabani na ohleli kwindawo yokubonela ephupheni unendima Espectador, ke uphawu lwephupha lumele amandla ephupha lokujonga kunye nokuhlalutya imeko. Mhlawumbi ilungile kubomi bokwenyani abaphulaphuliungabeka ezakho iinkxalabo ecaleni kwalo mzuzu.
Nangona kunjalo, ukuba umile eqongeni ephupheni kwaye uphakathi kwengqwalaselo yabaphulaphuli kwiholo yemidlalo yeqonga, uphawu lwephupha lubonisa imeko ekhethekileyo okhoyo ngoku. Umphuphi kufuneka afumane indlela yakhe kule meko kwaye afunde ukujongana nayo.
Isimboli yamaphupha "yeholo yemidlalo yeqonga" inokuba sisikhumbuzo kutoliko lwamaphupha. ngaphantsi kokuzenzela ukuziphatha. Mhlawumbi ukuphupha kuhlala kwenza umboniso wayo yonke into kwaye kuvelise imeko nganye phambi kwabanye.
Isimboli yephupha «iholo yemidlalo yeqonga» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, iphupha elinophawu "lweholo yemidlalo yaseshashalazini" libonelela ngeqonga le-subconscious yokubonisa iminqweno yalo kunye neepateni zokwenyani ezikwimo engabonakaliyo.
Ngokukodwa xa iphupha ngokwalo limi eqongeni kwaye libonakalisiwe kuluntu kwindawo yemidlalo yeqonga, le yenye yeendlela zokuchazwa kwamaphupha. uvavanyo olunzulu. Ukuqonda amaphupha kujongana nako ephupheni ngemixholo efihliweyo yengqondo kwaye kufuneka uwavavanye. Ukongeza, uphawu lwephupha "igumbi lemidlalo yeqonga" ekuchazeni amaphupha linokubonisa isidingo sokuninzi ngqalelo ukuzibonakalisa xa iphupha ngokwalo livela njengomdlali weqonga.
Isalathiso esibalulekileyo soko Isimo esisiseko ebomini Ukuphupha kunokuba lolo hlobo lomsebenzi umntu ophuphayo abukele ehleli kwigumbi lemidlalo yeqonga. Ukuba umdlalo ohlekisayo ephupheni wenzeka eqongeni, isimboli yephupha ekuchazeni iphupha inokubonisa ukuba iphupha alithathwa ngokungathí sina. Ukuba uhlala uhleka into ebaluleke kakhulu kwabanye, oku kungakhokelela kubunzima kunxibelelwano lwasentlalweni.
Ukuba umntu ubona ukumelwa kwentlekele ephupheni, igumbi lemidlalo yeqonga ekuchazeni iphupha linokuba sisicelo sokungalingisi izinto ngokungeyomfuneko. Iqhekeza le-cabaret ephupheni linokubhekisa kwinto yokuba umntu ophuphayo ujonge ubomi ikakhulu kwicala lakhe elonwabileyo.
Isimboli yephupha «igumbi lokubonela» - ukutolika kokomoya
Kwinqwelo-moya yokomoya, iqhekeza eqongeni liyi-microcosm ekutolikeni amaphupha, imbonakalo yokwenyani yobukho. Uphawu lwephupha «kwigumbi lemidlalo yaseshashalazini» lubonisa indlela iphupha elivela ngayo kumbono okude umbono opheleleyo we ilizwe eligqithisileyo yamkela